A POI TAKTAK, MINDAT PASALTTHA CDF PAWL HRUAI CHOM AN HAU – The Chinlung Post
Mindat ahacang mi kahdoh nak ah Ralhrang Kawl ralkap lei nih chemical hmanmi hriamnam pawl an hman tiah Mindat CDF nih an lunghrinh. Chinram Mindat khuaahnu lei lam Mindat-Matupi lam pi ah ralhrang Kawl ralkap le CDF pawl karlak ah kah doh nak pawlaum rih I ralkap lei nih chemicalatal mi hriamnam pawl an hman ko la tiah CDF lei nih thawng an thanh.
Kawlca in an ttial mi: မင်းတပ်တိုက်ပွဲတွင် စကစတပ်များက ဓာတုလက်နက်များအသုံးပြု​ကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိဟု မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်​ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန် ရန်ကုန်၊ ​မေ ၁၇. ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့အနောက်ပိုင်း မင်းတပ်-မတူပီ လမ်းတွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီး အကြမ်း ဖက် စစ်​ကောင်စီတပ်များ ဓါတုလက်နက် အသုံးပြုဖွယ်ရှိသည်ဟု မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်​ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည်။
မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မတူပီမှ ဆင်းလာသော စစ်ကား (၆) စီးသည် လမ်းတွင်အကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်တိုက်ခံရပြီး မင်းတပ်မြို့သို့မရောက်နိုင်ဖြစ်​နေရာ မေလ ၁၅ ရက်တွင် မတူပီ ဗျူဟာမှ စစ်ကူ စစ်ကားနောက်ထပ် (၇) စီး ထပ်မံ ဆင်းလာ​ကြောင်း၊အနောက်ဘက်တိုက်ပွဲတွင်လည်း စကစတပ်များသည် RPG များ၊ လောင်ချာများ၊ ဟောင်ဝစ်ဇာ လက်နက်ကြီးများကို တောက်လျှောက်သုံးလာ​ကြောင်းသိရှိရသည်။
မင်းတပ်မြို့နှင့် ၁၆ မိုင်အကွာတွင် လက်နက်ကြီး ကျည်ကုန်၍ ထပ်ရှေ့မတိုးနိုင်တော့သောကြောင့် မတူပီမှ စစ်ကူတောင်း​ခြင်းဖြစ်မည်ဟု ယူဆရ​ကြောင်း၊ မေ (၁၇) ရက်နေ့တွင် မိုင် ၃၀ နှင့် ၄၀ ကြားတွင်ဖြစ်သောတိုက်ပွဲတွင် အသုံးပြုသော လက်နက်ကြီးများသည် ယခင်လက်နက်ကြီးများနှင့် မတူဘဲ CDF-Mindat ရဲဘော်အချို့သည် ဗုံးဆံများမထိ၊ ပြင်ပဒဏ်ရာများမရှိသော်လည်း မူးဝေခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ အရုပ်ကြိုးပြတ် အားနည်းခြင်းများဖြစ်၍ တွဲကူထမ်းထုတ်ရသည့် အခြေအနေ များ တွေ့ကြုံရ​ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Relchih:Chuncung Pawng Kahdoh Kong ah CDF-Hakha nih Chuncung Khuami Nawlnak an Tuah. Chuncung khuami hna sin ah theihternak tuah hmasa loin May 16 zaanlei ah Chuncung khua pawng ah CDF-Hakha nih SAC ralhrang an kahmi hna kong ah CDF-Hakha nih Chuncung khuami hna sin ah nawlnak ca an ttial. Nawlnak ca an ttialmi: CDF-Hakha le Ralhrang Kawl Ralkap cu Chinram Falam le Hakha kar Chuncung Khua pawng ah May 16, 2021 zanlei 5:30pm—8:00pm tluk kahdohnak kan tuah.
Cu Chunchung pawng kahdohnak cu humhim ralrinnak ruang ah Khuami, Mino bu le Khua nupa hna sin theihter hmasa lo in kan cawlcanghnak cungah nan kan ngaithiam I na kan theihthiamnak lai kan in nawl hna. Ralhrangasimi Ralkap cu Mizapi nih kan doh lio cuahmah ah mah pumpak zawnruahnak le miaknak lawng tuak in CDF-Hakha kan cawlcanghnak vialte Ralkap sin ahaphuangmi inntek Chuncungmi nan um sualasi ahcun fakpi in dantatnak kan tuah lai tiah in theihter hna.
Miphun le ram luatnak ding le damnak ding ah kan zapi rian kan ngei cio ti ruat bu in..Chinland Defense Force-Hakha.Chuncung pawng kahdohnak ah SAC ralhrang6an thi i 10 leng hliamhma an pu tiah CDF nih thawngpang an rak chuah. CDF-Hakha lei in Pu Van Biak Tling nih kan ram, kan miphun le Federal Democracy ca ahanunnakapek. Credit:The Chin Journal